PMakore chiuru ezera, aya marapiro kubva kuSahara Desert asi zvakadaro maitiro matsva ekurapa spas kupota nyika.
Kamera mukaka: runako uye hutano chinhu.
Mukaka wamakamera une yakakwira yakawanda yemaminerari (iron), mavitamini (A, B, C), elastin uye lanolin. Iyo ine zvakare lactic acid iyo inobatsira mukuvandudzwa kwesero. Iyo ine zvakare inonyaradza, inovaka uye antioxidant zvivakwa. Yakanakira ganda rakatsamwa kana rakatsamwiswa. Mukaka wekamera unonyanya kushandiswa mune sipo, asi kunewo mafuta, kuchengetedza bvudzi, kudzivirirwa kwezuva. Kana ikaiswa paganda, iri zvirokwazvo nekumwa iyo kuti mukaka wamakamera unounza mabhenefiti mazhinji kumuviri. Mukwanyina wehupenyu hwakanaka.
Prickly pear oil: itsva Argan.
Yakagadzirwa kubva pamhodzi yemichero, prickly peiri yemafuta inorimwa mugwenga reMoroccan. Prickly peari mafuta ine huwandu hwekodhi yakakosha yemafuta acids, omega 6 uye omega 9, asi chii chinoita kuti ive yakasarudzika nezvinyorwa zvayo yevhitamini E uye delta-7-stigmasterol, ine simba antioxidant yakasarudzika. mune chirimwa. Iyo inodzosera kusimba uye toni kune ganda rechiso uye inosimudzira maitiro echisikigo ekugadzirisa ganda. Iyo ine inoshamisa yakasikwa anti-kukwegura tensor maitiro. Yakanakisisa emollient, inorerutsa uye inodzivirira ganda kubva mukushomeka kwemvura. Inosiya chifukidzo chakapfava uye chakatsiga pane ganda. Izvo zvakare zvakanaka kwazvo kutarisira mavanga uye matsotsi.
mafuta ichi anokosha, achiri zvakavanzika, haisi mukwikwidzi namafuta argan chipingamupinyi mafuta peya ane unaku kunyange kwazvo kupfuura ayo "muzukuru" uye ayo munhuwi iri ndoda zvinovava.
Psammotherapy: pasi pejecha rinopisa.
Sezvatakaratidzwa mundima nyaya yapfuura, psammotherapy (inozivikanwawo kuti psammatotherapy) kana kuti jecha remishonga ndiyo tsika yemadzitateguru muNorth Africa. Inosanganisira kumiririra muviri kwemaminitsi anenge gumi mujecha rinopisa rerenje kuti ibvise rheumatism, arthritis kana lumbago. Sezvo mune sauna, tsvina inobviswa uye mishonga inononoka zvakanyanya. Iyi tsika iri kuitika iye zvino mune imwe spa. Bhokisi rejecha rinopisa ku 45 ° rinobvumira kuvhara muviri wevanoridzi nehupamhi hwemasentimita mashoma.
Zvimwe zvinyorwa pane yedu blog www.panafricanbeauty.com
Iwe wapindura"Kurapa kwakanaka kubva kuSahara" Maminitsi mashoma apfuura
Bhaibheri rekare re1500 ringati Jesu aisazo arovererwa pamuchinjikwa
Iyo nzira ina dzekubudirira - Wayne Dyer (Audio)
Mazuva 22 apfuura
Mukaka wekamera unonyanya kushandiswa mune sipo, asi kunewo mafuta emafuta, kuchengetedza bvudzi, kudzivirirwa kwezuva
Ndingafarire pfungwa dzako, ndokumbirawo utaurex